घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » साहसिक यात्रा » कसरी एक जंगली जनावरले तपाइँलाई आक्रमण गरी बाँच्ने?
साहसिक यात्रा • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • समाचार • मान्छे • पर्यटन • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
त्यहाँ धेरै चीजहरु तपाइँ एक जनावर को हमला बाट बच्न को लागी गर्न सक्नुहुन्छ तर थाहा छ कि शान्त रहन वा फिर्ता लड्न को लागी महत्वपूर्ण छ!
संयुक्त राज्य अमेरिका एक खतरनाक क्षेत्र हो जब यो जंगली जनावरहरु द्वारा मानिसहरु मा घातक हमलाहरु को लागी आउँछ। पछिल्लो २० बर्षमा, टेक्सास मा ५२० मानिसहरु मारिए, सबैभन्दा खतरनाक अमेरिकी राज्य जब यो घातक जनावरहरुको हमला को लागी आउँछ।
यस टोली आउटफोरिया प्रकट भएको छ कुन राज्यहरुमा १ 1999 देखि २०१ from सम्म सबैभन्दा घातक जनावरहरुको आक्रमण भएको थियोसाथ साथ जनावर जो छ सबैभन्दा समग्र मृत्युको कारण र मा विशेषज्ञ सुझाव प्रदान गरीएको छ के गर्ने जब एक खतरनाक जनावर द्वारा आक्रमण.
जब तपाइँ जीवित टाढा हिंड्न को लागी आक्रमण गर्न सक्नुहुन्छ के गर्न सक्नुहुन्छ को एक सूची को लागी तयार हुनुहोस्।
दस सबैभन्दा घातक अमेरिकी राज्यहरु जब यो एक जंगली जनावर द्वारा आक्रमण गर्न को लागी आउँछ
टेक्सास 520 को मृत्यु संग
उत्तर क्यारोलिना १ 180 २।
ओहियो 161 XNUMX१XNUMX
दस सुरक्षित अमेरिकी राज्यहरु जब यो एक जनावर द्वारा हमला हुन को लागी आउँछ
उत्तर डकोटा:। 0०
रोड आइलैंड:। 0
नयाँ ह्याम्पशायर: .10१. .XNUMX
हवाई: .18 XNUMX..XNUMX
सबैभन्दा घातक जनावरहरु कि अमेरिकन wirld यात्रा मा मार्छन्
ब्राउन भालु 70
कालो भालु: ५४
ध्रुवीय भालू: १०
कार्ल Borg Outforia को सम्पादक हो र आफ्नो खाली समय मा एक उत्सुक अन्वेषक हो। खतरनाक जनावरले आक्रमण गर्दा के गर्ने भनेर उनीसँग केहि विशेषज्ञ सल्लाह छ।
"एक जनावर द्वारा हमला हुनु एक डरलाग्दो तर धेरै वास्तविक खतरा हो जब उत्तरी अमेरिका वरपर साहसिक कार्यहरुमा जाँदैछ, त्यसैले हामी पक्का गर्न चाहन्छौं कि तपाइँ सावधानी अपनाउनु पर्छ यदि तपाइँ कहिल्यै यी खतरनाक जनावरहरु बाट खतरा महसुस गर्नुहुन्छ।
कसैलाई मेरो मुख्य सल्लाह यी साहसिक ठाउँहरु मा जाँदै हुनुहुन्छ तपाइँ एक जंगली जनावर भर मा आउन को लागी तयार हुन सक्नुहुन्छ। मँ सधैं तपाइँलाई सिफारिश गर्दछु क्षेत्र मा तपाइँ भ्रमण गरीरहनुभएको छ मा सबैभन्दा प्रमुख जनावरहरु को अनुसन्धान, विभिन्न जनावरहरु लाई एक आक्रमण को सामना गर्दा फरक प्रोटोकॉल मतलब। उदाहरण को लागी एक खैरो र कालो भालु को बीचको फरक थाहा पाएर तपाइँको जीवन बचाउन सक्छ! जब एक कालो भालु द्वारा धम्की महसुस, तपाइँ आफैंलाई सकेसम्म ठूलो बनाउन को लागी, तपाइँको टाउको माथि आफ्नो हात उठाउनुहोस् र धेरै शोर गर्नुहोस्। जबकि एक खैरो भालु संग तपाइँ अत्यन्त शान्त रहनु पर्छ र भालु स्प्रे को लागी पुग्न को लागी।
शार्क जस्तै पानी जनावरहरु संग तपाइँ सधैं अनियमित पौडी बाट बच्न को लागी यो उनीहरुलाई आकर्षित गर्न सक्छ, तथापि, यदि उनीहरु तपाइँलाई आक्रमण गर्न थाल्छन् - हतियारको रूपमा केहि प्रयोग गर्नुहोस्, वा तपाइँको मुट्ठी र खुट्टा - उनीहरुको आँखा र गिल्स लाई लक्षित गरी।
एलीगेटरहरु को लागी यो फरक छ, यो सधैं राम्रो छ केवल दलदली नदीहरु बाट बच्न को लागी, यदि तपाइँ आक्रमण गरीरहनुभएको छ, तुरुन्तै फिर्ता लड्नुहोस् तर यो रोल्ड गर्न को लागी विरोध नगर्नुहोस् किनकि यो तपाइँ एक हड्डी भाँच्न सक्छ।
भालुहरु उत्तरी अमेरिका मा धेरै पैदल यात्रा ट्रेल्स मा एक सामान्य खतरा हो, र प्रत्येक प्रजाति एक फरक तरीका संग व्यवहार गरिनु पर्छ। उत्तरी अमेरिका मा उपस्थित तीन भालु प्रजातिहरु को, तपाइँ सम्भवतः मात्र कालो भालु वा एक खैरो भालु मा भाग्नुहुनेछ, ध्रुवीय भालू मात्र साँच्चै आर्कटिक सर्कल को उत्तर पाईन्छ।
यदि तपाइँ एक कालो भालुको सामना गर्नुहुन्छ, तब तपाइँ गम्भीर चोट वा मृत्यु बाट बच्न को लागी एक राम्रो मौका छ। कालो भालुहरु खैरो भालुहरु भन्दा साना छन् र, उनीहरुको नाम को बावजुद, रंगहरु को एक किस्म मा आउँछन्। यदि तपाइँ एक भेट्टाउनुहुन्छ, तपाइँ आफैंलाई सकेसम्म ठूलो बनाउनु पर्छ, तपाइँको टाउको माथि तपाइँको हात उठाउनुहोस् र धेरै शोर गर्नुहोस्। तपाइँको हिड्ने साथीहरु लाई उहि कुरा गर्नु पर्छ जबकि आफैंलाई तपाइँ को लागी सकेसम्म नजिकको स्थिति मा राख्नु पर्छ। यो भालु को लागी एक डरलाग्दो मोर्चा प्रस्तुत गर्दछ र आशा छ कि यो तपाइँलाई राम्रो संग एक्लै छोड्नु पर्छ। जे होस्, यो कुनै पनी एक मूर्खतापूर्ण रणनीति हो, र तपाइँ सधैं भालु को देश मा प्रवेश गर्दा एक सजीलो पहुँच ठाउँ मा तपाइँ संग भालु स्प्रे बोक्नु पर्छ, र हावा सींगहरु कालो भालुहरु लाई डराउन को लागी विशेष गरी उपयोगी हुन सक्छ।
यदि तपाइँ एक खैरो भालु मा हुन्छ, तब तपाइँ धेरै फरक व्यवहार गर्नु पर्छ। तपाइँ धेरै बिस्तारै र शान्तपूर्वक तपाइँको भालु स्प्रे को लागी पुग्नु पर्छ जबकि अझै पनी सम्भव छ। एक पटक तपाइँ तपाइँको निवारक को उपयोग को लागी तयार छ, एक ढिलो र नियन्त्रित तरीका मा भालु बाट टाढा जान को लागी शुरू गर्नुहोस्, जनावरलाई चकित पार्न को लागी हरेक प्रयास गर्दै, एक शान्त, शान्त, र आश्वस्त आवाज मा बोल्दा। खैरो भालु तपाईं तिर सुरु गर्नुपर्छ, प्राणी को टाउको माथि मात्र तपाइँको भालु स्प्रे लक्ष्य र यो स्प्रे को एक लामो खुराक दिनुहोस्।
यहाँ तपाइँ कसरी फिर्ता लड्न सक्नुहुन्छ जब एक खतरनाक जनावर द्वारा आक्रमण मा केहि निर्देशनहरु छन्
कुनै पनी जनावरको हमला संग, यो सधैं सबै भन्दा राम्रो प्रयास र एक शार्क संग एक मुठभेड बाट बच्न को लागी यदि सम्भव छ। यो गाह्रो हुन सक्छ किनकि उनीहरु पानी को मुनि पौडी खेल्न कठिन छन्। जे होस्, यदि एक देखीएको छ, तपाइँ आफ्नो बाटो शान्त को रूप मा सम्भवतः किनारा गर्न को लागी गर्नु पर्छ। अनियमित पौडी खेल्ने र स्प्ल्याशिंग बाट बच्नुहोस्, किनकि यो गतिविधि शार्क को ध्यान आकर्षित गर्दछ।
यदि तपाइँ एक शार्क द्वारा आक्रमण गरीएको छ, यो सिफारिश गरीन्छ कि तपाइँ यसलाई बलियो रूप मा तपाइँ सक्षम हुनुहुन्छ, तपाइँ जो हतियार को रूप मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाइँको मुट्ठीहरु र खुट्टाहरु को उपयोग गरीरहेछ यदि प्रयोग गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ उनीहरुको आँखा र गिल्स लाई लक्षित गर्नु पर्छ, किनकि यी दुबै शार्क को लागी संवेदनशील क्षेत्रहरु हुन्। शार्कको नाक एक कमजोर स्थान भनिएको छ कि उनीहरुलाई अर्को आक्रमण बाट रोक्न सक्छ।
यदि तपाइँ टोक्नु भएको छ, वा मात्र केहि तपाइँको खुट्टा को बिरूद्ध पौडी लाग्छ, तपाइँ पानी को रूप मा छिटो र शान्त बाट सकेसम्म बाहिर निकाल्नु पर्छ र कुनै रगत बग्ने क्षेत्रहरुमा दबाव लागू गर्नु पर्छ। तपाइँ तब आपतकालीन सेवाहरु लाई फोन गर्नुहोस् र आफैंलाई सकेसम्म चाँडो चिकित्सा सहायता पाउनुहोस्।
यो साँप पत्ता लगाउन गाह्रो हुन सक्छ, किनकि उनीहरु अग्लो घाँस, भूमिगत, वा सानो दरार र कभर क्षेत्रहरु मा लुक्न को लागी हुन्छन्। तपाइँ पानी को माध्यम बाट wading गर्दा सर्पहरु लाई सामना गर्न सक्नुहुन्छ, जसको मतलब यो हो कि तपाइँ यो महसुस गर्न सक्नुहुन्न कि तपाइँ टोक्नुभएको छ जब सम्म यो धेरै ढिलो भैसकेको छ। यस उदाहरण मा, तपाइँ सधैं पनी कुनै खरोंच जाँच गर्न को लागी सुनिश्चित गर्न को लागी कि उनीहरु साँच्चै साँप काटेको छैन।
सर्पको टोकाई घाउमा रहेको पct्क्चर मार्क्स को एक जोडी द्वारा पहिचान गर्न सकिन्छ। अन्य संकेतहरुमा पness्क्चर को आसपास लाली र सूजन, गम्भीर दुखाइ, बान्ता र उल्टी, अशक्त दृष्टि, सास फेर्न कठिनाई, सुन्न वा तपाइँको अंगहरु मा एक झुनझुना सनसनी, र लार र पसीना मा वृद्धि शामिल छ।
यदि तपाइँ टोक्नुभएको छ भने, शान्त रहन को लागी र सम्भव छ भने सर्प को रंग र आकार याद गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस्, यो प्रजातिहरु र उपयुक्त उपचार लाई अझ छिटो पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, शान्त र अझै अझै काट्ने शिकार रहन्छ, लामो समय सम्म यो कुनै पनी विष को लागी शरीर को माध्यम बाट फैलाउन को लागी लिन्छ। तपाइँले सकेसम्म चाँडो आपतकालीन सेवाहरु लाई फोन गर्नु पर्छ, र काट्ने पीडित लाई बस्नुहोस वा सुत्न को लागी मुटु को स्तर तल राख्नु पर्छ। काट्न सकेसम्म चाँडो तातो साबुन पानी संग सफा गरिनु पर्छ र सुक्खा, सफा ड्रेसिंग संग कभर।
विष बाहिर निकाल्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यसले मामिलालाई नराम्रो बनाउन सक्छ र दोस्रो व्यक्तिलाई विष दिन सक्छ। घाउ साधारण धुने र माथी विस्तृत ड्रेसि alone बाहिर एक्लै छोडिनु पर्छ। तपाइँले कुनै पनि अल्कोहल वा क्याफिनयुक्त पेय पदार्थ को उपभोग गर्नुहुन्न, र घाउ मा एक आइस प्याक लागू गर्न आग्रह को विरोध गर्नुहोस्।
मानिसहरु मा एलीगेटर हमलाहरु अपेक्षाकृत दुर्लभ छन्, तपाइँ जान्न खुशी हुनुहुनेछ। एलीगेटरहरु बाट बच्न को लागी सबैभन्दा राम्रो तरीका नदीहरु र दलदली बस्तीहरु बाट टाढा रहनु हो जहाँ उनीहरु बस्छन्। यदि तपाइँ पानी मा हमला हुनु पर्छ, एलीगेटरले सम्भवतः तपाइँलाई टोक्ने कोशिश गर्नेछ र त्यसपछि पानीमा रोल गर्नुहोस्। तपाइँ रोलिंग को प्रतिरोध गर्न को लागी कोशिश गर्नुहुन्न, किनकि यो तपाइँ एक हड्डी, वा तपाइँको रीढ़ को हड्डी को कारण हुन सक्छ, तपाइँ गेटोर को दया मा छोड्न सक्नुहुन्छ।
जे होस्, तपाइँ सधैं तपाइँ एक लडाई को रूप मा धेरै राख्न सक्नुहुन्छ। मानिसहरु को रूप मा एलीगेटर को प्राकृतिक शिकार छैन, उनीहरु प्राय मानिसहरु लाई छोड्छन् कि चीजहरु लाई उनीहरुको लागी धेरै गाह्रो बनाउँछ। यदि सम्भव छ भने तपाइँ उनीहरुको आँखा र उनीहरुको थुक लक्षित गर्नु पर्छ, तर उनीहरुको मुंह खोल्न को लागी पुरस्कार को प्रयास बाट बच्न को रूप मा उनको काट्ने शक्ति अविश्वसनीय शक्तिशाली छ र यो एक बर्बाद प्रयास हुनेछ। तपाइँ पनी कहिल्यै मरेको खेल्नु हुदैन, किनकि उनीहरु लाई तपाइँ जाने को लागी एक कारण छैन।
यदि तपाइँ भूमि मा एक एलीगेटर मुठभेड, तपाइँ सधैं यदि सम्भव छ भने भाग्न को लागी प्रयास गर्नुपर्छ। जबकि alligators छोटो दूरी मा धेरै छिटो स्प्रिन्ट गर्न सक्छन्, उनीहरु गति राख्न सक्दैनन्। तेसैले, तपाइँको सबै भन्दा राम्रो शर्त तपाइँ र gator को बीच सकेसम्म धेरै दूरी राख्नु हो।
यदि तपाइँ एक कौगर भर मा आउनुहुन्छ, तब तपाइँ एक कालो भालु को सामना गर्नुभएको छ जस्तै एक समान तरीका मा कार्य गर्नु पर्छ। आफैंलाई सम्भव भएसम्म ठूलो देखाउनुहोस् र चिल्लाएर वा सीटी वा हावा सीorn्ग उडाएर ठूलो आवाज बनाउनुहोस्। तपाइँ कौगरको सामना गर्नुपर्दछ, यसमा तपाइँको पछाडि फर्काउनु हुन्न, तर प्रत्यक्ष आँखा सम्पर्क बनाउन बाट बच्न को लागी यो आक्रामक व्यवहार को रूप मा व्याख्या गर्न सकिन्छ र कुगर आक्रमण गर्न को लागी भड्काउन सक्छ।
तपाइँ एक कौगर बाट भाग्न को लागी कोशिश गर्नुहुन्न, किनकि यो शिकार को पीछा गर्न को लागी जनावर को शिकारी वृत्ति ट्रिगर हुनेछ। कौगरहरु पनि धेरै छिटो जीवहरु हुन्, त्यसैले कुनै एक को पनी बाहिर प्रयास बेकार हुनेछ। यसको सट्टामा, यदि कौगरले तपाइँलाई आक्रमण गर्ने प्रयास गर्दछ, तपाइँ यसलाई जोसुकै तरीकाले लड्नु पर्छ। कोगर हिर्काउनुहोस् जुनसुकै लागू गर्न को लागी तपाइँ हातमा छ, वा तपाइँको मुट्ठी प्रयोग गर्नुहोस् यदि तपाइँसँग छ, कोगर आक्रामकता द्वारा निवारण हुन जान्दछन्। तपाइँ पनि एक आक्रामक कौगर हटाउन काली मिर्च स्प्रे वा भालु स्प्रे को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
मानिसहरु मा ब्वाँसो को हमला एक धेरै दुर्लभ घटना हो, र सामान्यतया, मात्र हुन्छ जब ब्वाँसो पागल हो वा यदि यो मानिसहरु को अभ्यस्त भएको छ। अन्यथा, ती सामान्यतया तब हुन्छन् जब ब्वाँसोले कुकुरलाई आक्रमण गर्दछ, जुन यो एक क्षेत्रीय खतरा को रूप मा मानिन्छ, र मालिक हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्दछ।
यदि तपाइँ एक ब्वाँसो भर मा आउनुहुन्छ, तपाइँ आफैंलाई अग्लो र ठुलो देखाउनु पर्छ, बिस्तारै टाढा पछाडि आँखा सम्पर्क कायम राख्दै। ब्वाँसो मा तपाइँको पछाडि नबिर्सनुहोस् वा यो बाट भाग्न, यो पीछा गर्न को लागी जनावर को प्रवृत्ति ट्रिगर हुनेछ। यदि तपाइँसँग एक कुकुर छ जब तपाइँ ब्वाँसोको सामना गर्नुहुन्छ, तपाइँको पाल्तु जनावर एड़ीमा ल्याउनुहोस् र आफैंलाई दुई जनावरहरु बीच राख्नुहोस्। यो मुठभेड को अन्त्य हुनुपर्छ।
यदि ब्वाँसो पछाडि हट्दैन र आक्रामकता को संकेत, जस्तै भुक्न, चिच्याउने, यसको पुच्छर उच्च समातेर, वा आफ्नो ह्याकल उठाउन को रूप मा प्रदर्शित गर्दछ, तपाइँ सकेसम्म धेरै आवाज निकाल्नु पर्छ र यसमा चीजहरु फ्याक्नु पर्छ। यो आशा छ कि ब्वाँसो धेरै नजिक आउन बाट रोक्नु पर्छ। जे होस्, यदि यो तपाइँलाई आक्रमण गर्दछ, तपाइँ पछाडि आक्रामक रूपमा सकेसम्म लड्नु पर्छ ताकि तपाइँलाई आक्रमण गर्न लायक लाग्दैन।
एउटा अन्तिम बिचार…
जे होस्, यो प्रयास गर्न को लागी र पहिलो ठाउँ मा यो स्थिति बाट बच्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ। धेरै जनावर हमला जनावर को चासो को बाहेक बाँच्न को लागी सानो कोठा छोड्छन्। यदि तपाइँ जंगली बाहिर हुनुहुन्छ, सभ्यता वा आपतकालीन सेवाहरु बाट टाढा, त्यहाँ धेरै थोरै गर्न सकिन्छ कि यदि तपाइँ टोक्नुभयो, स्टung्ग, वा अन्यथा एक आक्रामक जंगली जनावर द्वारा घाइते हुनुहुन्छ।
तेसैले, यो अविश्वसनीय रूप मा महत्वपूर्ण छ कि तपाइँ स्थानीय वन्यजीव विशेषज्ञहरु वा पार्क अधिकारीहरु को सल्लाह को पालन गर्न को लागी सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ क्षेत्र को शिकारीहरु को बिरुद्ध सुरक्षित हुनुहुन्छ। प्रकृति एक्सप्लोरर को लागी सामान्य सल्लाह समूह मा यात्रा गर्न को लागी हो, ताकि तपाइँ एक सजिलो लक्ष्य को रूप मा पहिचान गरीएको छैन, र हर समय ट्रेल मा राख्न को लागी। यो न केवल तपाइँको आफ्नै जीवन को रक्षा को लागी महत्वपूर्ण छ, तर उनीहरुलाई प्राकृतिक बास को सुरक्षा को लागी उनीहरुलाई सकेसम्म थोरै परेशान गरेर।
तपाइँ यो पनि सजग रहनु पर्छ कि बच्चाहरु लाई खतरनाक जंगली जनावरहरु को लागी जानिन्छ भनेर उनीहरुको कम र कम खतरनाक उपस्थिति को कारण लक्षित हुन को लागी एक उच्च जोखिम मा राख्नु पर्छ।
तपाइँ पूर्ण सल्लाह र अनुसन्धान हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेर।